Suavecito - Whiskey Bar Body Soap | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › New Arrivals › Suavecito - Whiskey Bar Body Soap
Regular price MMK 20,000
Default Title - MMK 20,000 MMK
--Cleanse | Exfoliate | Whiskey Bar Fragrance--
Gentlemen တို့နေ့စဉ် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင်နေမှုအတွက်...
Suavecito - Whiskey Bar Body Soap က ရှေးမူမပျက် ရိုးရှင်းတဲ့ Classic Scrubbing ဆပ်ပြာအခဲအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ စွဲဆောင်အားကောင်းလှသော Whiskey Bar အမွှေးရနံ့သစ်နှင့်အတူ သင့်အသားအရည်ကို သန့်ရှင်း၊ သင်းပြံ့စွဲကျန်နေစေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါရှိတဲ့ သဘာဝ Oatmeal နှင့် Rice Bran အစေ့အဆန်များ၊ Pumice မီးတောင်ကျောက်စများက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများနှင့် Cell အသေများကို သန့်ရှင်း Exfoliate လုပ်ပေးပြီး၊ အရေပြား အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးကာ အသားအရည်ကြမ်းတန်းမှုများနှင့် အသားမာများကို ချောမွေ့လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဆေးကြောအသုံးပြုအပြီးတွင်လည်း အချို့သောဆပ်ပြာများကဲ့သို့ စေးချောကျန်နေခဲ့ခြင်းမရှိပဲ၊ ပြီးပြည့်စုံသော တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကိုပေးစွမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စွဲမက်ဖွယ် Whiskey Bar အမွှေးရနံ့သစ်ကလည်း သင့်တစ်နေ့တာအတွက် ခွန်အားများကိုပေးစွမ်းသွားမှာဖြစ်လို့၊ သင့်ရဲ့နေ့သစ်တိုင်းကို #mmgents မှ Suavecito - Whiskey Bar Body Soap နှင့်အတူ စတင်လိုက်ပါ။
Whiskey Bar အမွှေးရနံ့သစ်
Oatmeal ဖြင့် အရေပြား အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်း
Rice Bran, Pumice အစေ့အဆန်များဖြင့် Exfoliate လုပ်ပေးခြင်း
A traditional Body Soap foraclassic clean. Let the masculine Whiskey Bar fragrance wash over you as you bathe. Pumice and bran exfoliate rough skin on problem areas such as elbows and heels, while oatmeal helps lock in moisture.
Masculine Whiskey Bar fragrance
Exfoliating Rice Bran & Pumice